TikTok adịghịzi na Storelọ Ahịa Play na Applọ Ahịa Ngwa na India | Gam akporosis
A machibidoro TikTok iwu na mba ebe ọ kacha nwee ndị ọrụ
Na-ekwu maka ikpe ụlọ ikpe Madras nke Eprel 3, Gọọmentị India taa machibidoro nbudata ngwa TikTok na mba ahụ. Ministri nke Elektrọnik na Teknụzụ Ozi gwara Google na Apple ka ha wepụ ya n'ụlọ ahịa ha.
Lọ ikpe a kwuru na ọ na-agba ndị gba ọtọ ume ma nwee ike itinye ụmụaka na-edina ụmụaka n'ike.
The video nkekọrịta ngwa chere a oke iwe n'ihi nsogbu ndị dị ka enweghị ike maka njikwa mma na mkparị na ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na ikpo okwu. N'oge ndị na-adịbeghị anya, ndị nwe obodo achọpụtakwara okwu iyi egwu na ịntanetị site na ngwa ahụ.
TikTok, ngwa iji mepụta ma kesaa obere vidiyo
Ntughari, ụlọ ọrụ mmepe TikTok, mara iwu ụlọ ikpe dị elu na Courtlọikpe Kasị Elu nke India, na-ekwu maka ikike ikwu okwu n'efu na mba ahụ. Ná nzaghachi, Courtlọikpe Kasị Elu wepụrụ okwu ahụ n'Courtlọikpe Ọchịchị, ebe a jụrụ akwụkwọ ụlọ ọrụ ahụ ma etinyere mmachibido iwu.
TikTok bụ ngwa nkekọrịta vidiyo nke na-enye ndị ọrụ ohere imepụta obere vidiyo nwere mmetụta pụrụ iche. Ndị ọrụ nwere ike igosipụta ihe okike ha na egwu ndị ama ama n'ọtụtụ ụzọ. O nwere ihe dị ka nde mmadụ 500 na-arụsi ọrụ ike n’ụwa nile, gụnyere ihe karịrị nde 120 na India.ma na nso nso a karịrị XNUMX ijeri nbudata ụwa. Ọ bụ nnukwu ihe ịma aka Facebook, Snapchat, Instagram, na saịtị mgbasa ozi ndị ọzọ.
Ngwa ahụ ka dị na Applọ Ahịa Apple ruo etiti abalị Tuesday, mana ugbu a egbochila kpamkpam na mba ahụ, na-atụle nke ahụ Playlọ Ahịa Google Play Stores Kpochiri Ntugharị Na India Mgbe Ọ natara Arịrịọ Site na Ozi ahụ.
Dika, uzo ozo di na Tik Tok
Companylọ ọrụ ahụ were ihe dị ka mmadụ 250 na India ịzụlite ngwa ma debe taabụ na ọdịnaya. Ọ bụ ọghọm na mberede maka Bytedance, na ugbu a ọ ga-abụ ihe na-akpali mmasị ịhụ otú o si azaghachi. Ga-amalite ngwa TikTok ọzọ maka India naanị?
Register Koodu QR
Developer: TikTok nwere. Ltd.
Ahịa: Ka a ga-ekwuwapụta
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » A machibidoro TikTok iwu na mba ebe ọ kacha nwee ndị ọrụ
Xiaomi Mi 9 na-anata ụdị beta kachasị ọhụrụ nke 10.9.4.17 nke MIUI nke na-echebe ya pụọ ​​na ndị na-agba ọsọ
Galaxy S10 na S10 + karịrị Galaxy S10e